बुटवल–नारायणगढ सडक ४ लेन बन्दै | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार बुटवल–नारायणगढ सडक ४ लेन बन्दै
रूपन्देही । महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड ४ लेनको बन्ने भएको छ । हाल २ लेनको उक्त सडक खण्ड चौडा पार्ने कार्यको शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको छ । राजमार्गको १ हजार २७ किलोमिटरमध्ये बुटवल–नारायणगढ ११४ किलोमिटर सडक खण्ड बस्तीमा ६ लेन र जंगलमा ४ लेनमा विस्तार गर्न थालिएको हो । सो सडकखण्डमध्ये २८ किलोमिटर ६ लेनको हुनेछ ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक चौडा पार्न लागिएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा विकासको महाअभियान शुरू भएको बताउनु भयो । त्यसको पहिलो प्राथामिकतामा भौतिक पूर्वाधार परेको उहाँको भनाइ छ । ‘२०७५ देखि ८० सम्म सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको युग हो । २०८० देखि सुरुङमार्गको युग शुरू हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयका अनुसार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शनले सडक विस्तारको ठेक्का पाएको छ । आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ, जसमध्ये एडीबीले ८५ प्रतिशत रकम ऋण उपलब्ध गराउनेछ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । एडीबीले नेपाल सरकारलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको एडीबीको आयोजना निर्देशनालयले बताएको छ । २०८० साउन २२ गतेसम्म निर्माण सकिसक्नुपर्ने गरी गत पुस ४ गते सम्झौता भएको हो । सडक विस्तार भएपछि पनि २०८४ साउन २१ गतेसम्म मर्मत सम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नेछ ।
तिलोत्तमामा मेडिकल कलेज आयोजनाको उद्घाटन
शुक्रवार नै प्रधानमन्त्री ओलीले रूपन्देहीको तिलोत्तमा–१, नयाँमिलमा बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ । प्रस्तावित मेडिकल कलेज निर्माण हुने स्थान तिलोत्तमाको वडा नं. १ र ८ को वनक्षेत्रमा पर्दछ । अहिले आयोजनाको कार्यालयमा आयोजना प्रमुखसहित सातजना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उपसचिव मानबहादुर घिमिरेले बताए ।
गत फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नं. ५ को रूपन्देहीको तिलोत्तमा, प्रदेश नं. २ को महोत्तरीको बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । आयोजनाले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि ईआईए, गुरुयोजना निर्माण, जग्गा प्राप्ति लगायतका कामहरू गर्नेछ । दुई सय बिघा जग्गामा बन्ने कलेजका लागि करीब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
गौतम बुद्ध विमानस्थलको निरीक्षण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको शुक्रवार निरीक्षण गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्किङ क्षमता बढाउन तथा टर्मिनल बिल्डिङ अझ उत्कृष्ट बनाउन प्राधिकरण र आयोजनालाई निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भैरहवाले अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानको लागि रुट पाइसकेको र अहिले हवाई कम्पनीहरूसँग विमानस्थल प्रयोग गर्नेबारे सम्झौताको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले लुम्बिनीको विकासको लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।